ArticleApr 6, 2020
यस अघिको ब्लगमा हामीले प्रियजनको मृत्युको शोकबाट कसरी बाहिरिने भन्ने विषयमा, सद्‌गुरु मार्फत यो जान्यौँ कि यो पीडा र डिप्रेशनमा जाने समय नभई ती व्यक्तिले हाम्रो जीवनलाई जुन रूपमा समृद्ध बनाएका थिए, ती यादहरूलाई स्मरण गर्दै धन्य हुने समय हो । कसैको देहान्त भएपछि मरणोपरान्त के हुन्छ भन्ने विषय रहस्यमय छ । सद्‌गुरु, यहाँ त्यसमाथि प्रकाश पार्दै हुनुहुन्छ ।
प्रश्नः सद्‌गुरु, मृत्युपछि के हुन्छ ? के पुनर्जन्म हुन्छ ? यदि त्यसो हो भने, कुन कुराले व्यक्तिलाई एउटा जन्मबाट अर्को जन्ममा लैजान्छ ?
सद्‌गुरुः योगमा, हामी शरीरलाई पाँचवटा आवरण वा पत्रहरूमा हेर्दछौँ । भौतिक शरीरलाई अन्नमयकोष भनिन्छ । अन्न अर्थात् भोजन, त्यसैले यो भोजनबाट बनेको शरीर हो । दोस्रो पत्रलाई मनोमयकोष वा मानसिक शरीर भनिन्छ । तेस्रो पत्रलाई प्राणमयकोष भनिन्छ, जसको अर्थ हो ऊर्जा-शरीर । भौतिक, मानसिक र ऊर्जा शरीर जीवनको भौतिक आयामहरूसँग सम्बन्धित हुन्छन् । उदाहरणको लागि, तपाईंले यो प्रस्ट देख्न सक्नुहुन्छ कि बिजुली बल्ब भौतिक हो । विद्युत अर्थात् तारहरूको माध्यमले बहने विद्युतकणहरू पनि भौतिक हुन् । साथै, त्यो बल्बबाट निस्किने प्रकाश पनि भौतिक हो । यी तीनवटै भौतिक हुन् । त्यसैगरी, भौतिक शरीर स्थूल हुन्छ, मानसिक शरीर केही सूक्ष्म हुन्छ, अनि ऊर्जा (प्राण) शरीर अझ बढी सूक्ष्म हुन्छ । तर, यी सबै भौतिक प्रकृतिका हुन्छन् । व्यक्तिको शरीर, मन र ऊर्जामा कर्मको छाप हुन्छ । कर्मको छाप वा कर्मको संरचनाले नै तपाईंलाई भौतिक शरीरमा अड्याइरहेको हुन्छ । भलै, कर्म बन्धन भए तापनि, कर्मको तत्त्वको कारणले नै तपाईं शरीरमा रहिरहन सक्नुभएको छ, अनि जीवित हुनुहुन्छ ।
जब कसैको मृत्यु हुन्छ, त्यसबेला हामी भन्ने गर्छौँ- "यो व्यक्ति अब रहेन ।" तर, यो सत्य होइन । तपाईंले जुन रूपमा त्यस व्यक्तिलाई जान्नुभएको थियो, त्यस सन्दर्भमा मात्रै ऊ त्यहाँ नभएको हो, तर उसको अस्तित्व अझै पनि त्यहीँ रहेको हुन्छ । भौतिक शरीर यहीँ छोडिन्छ, तर मानसिक शरीर र प्राण-शरीरको अस्तित्व रहिरहन्छ, जुन व्यक्तिको कर्म कति बलियो छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ । अर्को गर्भ पाउनको लागि, व्यक्तिको कर्मको संरचनाको तीव्रता कम हुनुपर्छ, यो निष्क्रिय हुनुपर्छ । यदि आफ्नो चक्र पूरा गरेको कारण कर्मको संरचना एकदमै कमजोर भएको छ भने, यसले सजिलै अर्को शरीर पाउँछ । जब व्यक्तिले यो जीवनमा आफ्नो लागि निर्धारित कर्म पूरा गर्दछ, ऊ यत्तिकै मर्नेछ— कुनै रोग, दुर्घटना वा चोटपटक बिना नै । त्यस्तो व्यक्तिले केही घण्टामै अर्को शरीर पाउन सक्दछ ।
यदि तपाईंले कर्मको संरचनालाई शत-प्रतिशत छिन्नभिन्न पार्नुभयो भने, तपाईं विलिन भएर अस्तित्वसँग एक बन्नुहुन्छ ।
महासमाधि— परम मुक्ति
मुक्ति अर्थात् शरीर र मनको मूलभूत संरचनाबाट नै स्वतन्त्र हुनु, जीवन-जन्म-मृत्युको मूल प्रक्रियाबाट नै मुक्त हुनु ।
Editor’s Note: कायन्त स्थानम, ईशाद्वारा सञ्चालित दाहसंस्कारको सेवा हो, जुन शक्तिशाली उर्जाको आधारमा प्राचीन परम्परा र मृत्युको संस्कारलाई कुनै व्यवसायिक कामको रूपमा नभई सेवाको भावमा पुनरुत्थान गर्नमा समर्पित छ । साथै, सद्‌गुरुले कालभैरव कर्म र कालभैरव शान्ति प्रक्रियाहरू समेत तयार गर्नुभएको छ, जसबाट मृत व्यक्तिको शान्तिपूर्ण गमन सम्भव हुन सक्दछ । अधिक जानकारीको लागिः https://lingabhairavi.org/